Global Voices teny Malagasy » Tonizia: Fihetseham-po sy Filaharana Lava dia Lava Tamin’ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Oktobra 2011 13:28 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Voasokitra ao amin'ny tsiaron'ny mpifidy Toniziana, izay nameno ny birao fandatsaham-bato hatry ny vao maraimbe, ny andro androany [alahady]. Nifidy ny antenimieram-panorenana handrafitra ny Lalampanorenan'ny Firenena ny Toniziana.
Nialoha ny fifidianana dia nisy ny fanahiana fandrao ho vitsy ny salam-pandraisana anjara ka handiso fanantenana.
Tamin'ny 17 Oktobra, Toniziana @Arabasta1 ni-tweet hoe: 
Ny Nofy ratsiko amin'ny 23/10: fandraisana anjara vitsy amin'io andro io. Tonizia no ho resy amin'izany fa tsy ny antoko politika, MANDEHANA MIFIDY
Ny androm-pifidianana, anefa, tsy maintsy nijoro nandritra ny fotoana maharitra tanaty filaharana ny mpifidy ahafahany maneho ny safidiny. Kamel Jendoubi, lehiben'ny Vaomieram-pirenena Mahaleo tena misahana ny fifidianana milaza fa ”mihoatra lavitra noho izany noeritreretina” ny mpifidy.
Ny lahatsary manaraka etoana ao amin'ny YouTube no mampiseho izany filaharana lava dia lava izany ao ivelan'ny biraom-pifidianana iray.
Fotoana fohy mialoha ny hikatonan'ny biraom-pifidianana, mbola mijoro milahatra handrotsa-bato amin'izay eritreretin'ny rehetra ho fifidianana marina sy malalaka voalohany amin'ny tantaran'i Tonizia ny mpifidy.
ow.ly/i/jKjR 4ora folakandro fa mbola mirona mankany amin'ny foibem-pifidianana ihany ny olona.
Renin i Bouzizi tao amin ny foibem-pifidianana iray, Saripika <a href='http://twitpic.com/74njrw'>@nashmiq8</a> via twitpic
Heniky ny sarangam-piainana rehetra ny biraom-pifidianana, vonona ny haneho ny safidiny sy ho re amin'ny heviny avokoa ny Toniziana. Anisan'izany ny renin'i Mohamed Bouazizi, ilay mpivarotr'anana sy voankazo izay nandoro ny tenany tao Sidi Bouzid tamin'ny 17 Desambra 2011 ka niteraka ny hetsi-panoherana nampiala ny filoha teo aloha Zine Al Abideen Ben Ali.
Ranomaso, fihetseham-po sy fahatsapana ho manana rehareha sy sambatra no nameno ity androm-pifidianana ity. Indreto ny domberina sasantsasany avy amin'ny mpifidy Toniziana amin'ny alalan'ny tenifototra #tnelec.
@MedAliChebaane: My mom never voted before. Had a hard time trying to stop her tears 🙂 She made my day!
@MedAliChebaane:Tsy nifidy mihitsy ny reniko hatramin'izay. Sahirana nampangina azy 🙂 Lany taminy ny androko!
@tounsiahourra:  Mijoro ao anaty filaharana i Tonizia, filaharan'ny olona miandry ny demokrasia, filaminana sy faharetana no mampiseho ny dingana voalohany mankamin'ny demokrasia, Mirehareha amin'ireo Toniziana liam-baovao sy sivilize aho.
@Styledeouf: Niandry adiny telo latsaka fahefany aho ahafahana mifidy. #worthwaiting [mendrika andrasana]
@Emnabenjemaa : Tokana aman-tany ny zava-mitranga eto Tonizia. Faly amin'ny fisiana fanondro misolitiky ny ranomainty manga avokoa ny rehetra
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/10/24/24425/
 tweet hoe:: http://twitter.com/#!/Arabasta1/status/126038151679590400